परिवारको लालनपालनका लागि भन्दै विदेशीएका कटेले छोरा छोरी र श्रीमतीको लास समेत देख्न पाएनन् – Sanchar Patrika
परिवारको लालनपालनका लागि भन्दै विदेशीएका कटेले छोरा छोरी र श्रीमतीको लास समेत देख्न पाएनन्
July 7, 2020 212
गएको माघ महिनामा छोरा छोरीको पढाई खर्च र घराँयसी खर्चको जोहो गर्ने सपना बोकेर केदार स्यु गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मल्लेसीका कटे जेठारा भारत गए । उनि अहिले पनि भारतमा नै छन् । गाँउ घरमाआम्दानीको श्रोत केहि पनि नहुने र खेती किसानी बाट प्राप्त खान नपुग्ने र छोरा छोरीका लागि एक जोर नयाँ लुगा कपडा खरीद गरेर ल्याउने सपना बोकेर उनि भारत रोजगारीका लागी पुगेका थिए । उनको यो सपना अधुरै रहन पुगेको छ ।
असार १९ गते बेलुकी परेको अभिरल बर्षाका कारण उनको सह परिवारले पहीरोमा परेर ज्यान गुमायो । उनकी ४१ बर्षिया श्रीमती राममती देवि जेठारा, १६ र ७ बर्षिया छोरी शान्ति कुमारी जेठारा र अस्मीता जेठारा र ११ बर्षिया छोरा प्रयाग जेठारा को एउटै चिहान भयो । घर माथि बाट राती आएको पहिरोले सुती रहेका बालबालीका सहित उनकी पत्नी राममतीले पनि ज्यान गुमाईन् । राती १ बजे तिर गाँउमा कोलाहल नै मच्चिएको थियो । जोर जोरको बाहीर पानी परी रहेको थियो । रातीको समय ढुङ्गा खस्न थालेपछि स्थानीय जय जेठाराल बाहीर निस्कीए । हातमा टर्चलाईट बोकेर गाँउमा थिए । पहिरो जाने संकेत पाएपछि उनले गाँउका अधिकांसलाई जानकारी गराए । सबै भागे । तर राममतीले भने भाग्न नै पाईनन् । उनीएक्लै भएको भए साहेद भाग्न सफल हुन्थीन् । गाँउलेहरु भन्छन्: छोरा छोरीलाई सहीत विउझाएर संगै बाहीर निकाल्न खोज्दा सबैको एउटै चिहान भएको हुन सक्ने गाँउलेहरुको अनुमान छ । राममतीको पहिरोमा पुरीएको सब निकाल्दा उनको हातमा टर्चलाईट सहित भेटीएको थियो । उनकै घरमा सुत्न आएकी नवराज जेठारकी १५ बर्षिया छोरी सन्तु जेठाराको समेत मृत्यु भएको छ । नवराज जेठारा र कटे जेठारा भाई भाईका छोरा हुन् । कटेको परिवारको भने सबै पहिरोमा परी निधनभएको छ ।
८० बर्षिया दले जेठारा भने भाग्न नसकेर मृत्यु भएको हो । उनकै घरका अन्य सदस्यहरुले भने भागेर ज्यान बचाउन सफल भएका छन् । यस्तै अहिले सम्म बेपत्ता भएका २० बर्षिया गिरीजा जेठरा भने घर भित्र नभएर घर बाहीर बाट पहीरोले बगाएर बेपत्ता पारेको हो । उनि संगै रहेका राजेश जेठाराले भने हामफालेर ज्यान बचाउन सफल भएको बताए । घर माथि बाट पानी आउन थालेपछि पानी बुझ्नका लागी भन्दै गिरीजा र म संगै थियौ । गाँउजान थालेको पानीलाई एता-उती ढाल्ने काम गरी रहेका थियौ । अचानक भुईचालो सरह हल्लीएर जमिन नै उठेपछि मैले नजीकैको एउटा बेरुको रुख तर्फ हामफालेर त्यही रुखमा झुन्डीएर ज्यान बचाए तर गिरीजालाई भने पहीरोले कहाँ पुर्यो कहाँ पुर्यो पत्तो नै भएन ।
गाँउमा नयाँ लागेको कसैले नचिताएको यस पहिरोले मल्लेसी गाँउका ७ जनाको एकै चिहान बनाएको छ । साथै २० घर पहिरोले क्षती गरेपछि २० परिवारका मान्छेहरुलाई कहाँ बस्ने के खाने भन्ने समेत ठेगान छैन । शनिबार विहान सम्म पहिरोमा पुरीएका लास संगै जीवित रहेका मान्छेहरु आफ्नो घरको सुनाचाँदा पाईन्छ की भनेर खोजी रहेका थिए । तर माथी बाट ठुलो पहिरो गएको हुँदा घर सहीत अन्यसर सामान तथा पशुचौपाया माटो भित्र पुरीएकाथिए ।
कस कसको भयो घर क्षती
पहीरोले चनि जेठारा, गम्भीरे जेठारा, सुरेश जेठारा, दमन जेठारा,जयजेठारा, कैले जेठारा, मान्या जेठारा, गजेन्द्र जेठारा, गणेश जेठारा, ओकील जेठारा, अम्मर जेठारा, ईन्द्र जेठारा, लोक जेठारा, दिपक जेठारा, गोरे जेठारा, जय जेठारा, धनु जेठारा, सन्तोस जेठारा, कटे जेठारा घर बगाएको छ । जय जेठाराका भने २ वटा घर रहेका थिए । १९ परिवारका२० घर बगाए पछी उनिहरु अहिले नवादेब प्रा वि मेल्लेसीमा आश्रय लिई बसेका केदार स्युँगाँउपालिका ८ का वडा अध्यक्ष गणेश बोहराले बताए ।
पहिरोले उनिहरुका भैसी २२ वटा, गाई गोरु २४ वटा र बाख्रा ६५ वटा पहिरोमा पुरीएका छन् । पिडीत गम्भीरे जेठाराले भने जीवन भरी आर्जन गरेको सानो घर सम्पती पहीरोले बगाएर लियो । खाने खेत पनी पहीरोमा पुरीयो । अब कसरी खुट्टा टेक्ने भन्ने चिन्ता छ । उनीआफु र आफ्नो परीवारलाई बचाउन सकेकोमाभने उनिआफैलाई भाग्यले बचेको बताउन्छन् ।
६ जनाको एउटै चिहान
आईतबार पहिरोमा पुरीएका ६ जनाको सनाखत भै सकेपछि गाँउलेहरुले सामुहीक रुपमा दाह-संस्कार गरेका छन् । श्रीमती सहीत २ छोरी र १ छोरी गुमाएकाकटे जेठारा भारतको बंलोर बाट टेलीफोन गर्दै आफु घर आउने तयारीमा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
पहीरोमा घर पुरीएर विचल्लीभएका परिवारहरुलाई वरपरका छिमेकीहरुले खानाको बस्नको बन्दोबस्तमा लागी रहेका छन् । गाँउमा विपदआई लागे पछि मल्लेसी गाँउका आफन्त ईष्टमित्रहरु पनीअहिले घटनाको बुझी विस्तार गर्न र पिडीत परिवारहरुलाई सान्तोना सहयोग गर्न पुगेका छन् ।
नेपाल सरकारको राहातपुगेन
यता नेपाल सरकारले तत्कालै केदार स्युँगाँउपालिका मेल्लेखका पहिरो पिडीत परिवारहरुलाई राहातदिन नेपाली सेनाको हेलीकोप्टर बाट ल्याएपनि घटना स्थलमा बस्न नसकेर सदरमुकाम चैनपुरमाझारेको थियो । पहिरो पिडितहरुका लागि भनेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट आठ क्विन्टल चामल, ३७ वटा त्रिपाल र ४० वटा कम्मल घटना ल्याएको भएपनि अहिले सम्म घटना स्थलमा पुर्याउन सकेको छैन ।
गाँउ भएर बग्ने गण्डकी गाडले गाँउजाने सडक र बाटो भत्काई दिएपछि मल्लेसी गाँउमा जान समस्या छ । वडा अध्यक्ष गणेश बोहराका अनुसार खानाका लागी आफुहरुले ब्यावस्था गरीहाल्ने तर पिडीतहरुका लागी भाँडाकुडा, लत्ताकपडाको समस्या भएको बताए । १९ परिवारका झण्डै ६० जना मानीसहरु अहिले विद्यालयमा आश्रय लिएर उनिहरुको ब्यावस्थापनका लागी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले जोड दिनु पर्ने बताए । पहिरो गएपछि बालबालीका, महिलाहरु बढी समस्यामा परेका छन् । विद्यालयमा सबैलाई बस्ने ठाँउ समेत नरहेका कारण उनिहरु थप समस्या रहेको छ ।
Prevअमेरिकाले ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थीलाई देशबाट निकाल्दै, नेपाली विद्यार्थी पनि निकालि
Nextयो वर्ष कुन राशिको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस्
एकाएक ह्वात्तै बढ्यो बृद्धभत्ता, थाह पाऊनुहोस मासिक कति ?
कोरोना बाहना हो, ठेकदारकै बदमासीले मल आएन : कृषिमन्त्री भुसाल
केएल टावरले दियो व्यापारीहरुलाई भाडा छुट
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6235)
देशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! (5064)
देशैभरिका घरबेटीका लागि गृह मन्त्रालयले जारि गर्यो सूचना, यदि यस्तो गरेको पाइए हदैसम्मको सजाय हुने ! (2721)
भोलि साउन १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, सवारी साधन पूर्णरुपमा बन्द (2621)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2364)